Wicitaankii Trump ee sababay in Ukraine laga joojiyo gargaar la siin jiray | Xaysimo
Home War Wicitaankii Trump ee sababay in Ukraine laga joojiyo gargaar la siin jiray
Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa joojiyay gargaarkii bini’aadanimo ee dalka Ukraine la siin jiray 91 daqiiqo un ka dib markii madaxweyne Trump uu khadka taleefoonka kula hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky bishii July, waxaana hakintaasi lagu ogaaday farriin cusub oo ay dowladdu shaacisay.
Mitch McConnell, oo ah hoggaamiyaha Aqalka Senate-ka, ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa go’aan ka gaari doona sida loo qaadayo dacwadda ka dhanka ah Trump, Dimuqraaddiyiintuna waxay ka doonayaan inuu faahfaahiyo markhaatiyaasha uu adeegsan doono iyo nooca uu noqon doono markhaatifurka la aqbali karo.
“Wuu diiday inuu ciyaaro kubadda. Wali waan ismari la’nahay”, ayuu yiri ka dib markii uu shir kooban la qaatay hoggaamiyaha tirada laga badan yahay ee Senate-ka ugu jirta xisbiga Dimuqraaddiga, Chuck Schumer.
Mr McConnell ayaa mooshinka xilka looga qaadayo Trump ku tilmaamay “kii ugu dhakhsada badnaa, muddada ugu gaaban socday, oo caddaalad darro ku dhisan”.